Star sy Rotary Club Ivandry: nizara sakafo hoan’ireo mpianatry ny EPP | NewsMada
Star sy Rotary Club Ivandry: nizara sakafo hoan’ireo mpianatry ny EPP
Mitohy hatrany ny asa eny anivon’ny fiarahamonina ataon’ny Star. Vokatry ny fiaraha-miasa eo aminy sy ny Rotary Club Ivandry, nisy ny fanampiana natao ho an’ireo mpianatra eny anivon’ireo EPP miisa 12 eto an-drenivohitra. Fizarana sakafo izy ity, nahitana vary, hena, legioma, voankazo ary zava-pisotro Star.
Nisitraka voalohany izany ireo mpianatra tetsy amin’ny EPP Andraharo, omaly. Niara-nifarimbona tamin’ny fikarakarana sy ny fizarana izany ireo mpiasan’ny Star sy ny avy amin’ny Rotary Club Ivandry. Fanombohana ihany io, satria sakafo mahatratra 11800 isa no mbola hozaraina mandritra ny taona 2019.
Tsiahivina fa ny ankamaroan’ny mpianatra eny amin’ny sekolim-panjakana fototra dia avy amina fianakaviana sahirana avokoa. Matetika no tsy ampy ny sakafo ary tsy ara-pahasalamana, ka misy fiantraikany ratsy amin’ny fianaran’ireo ankizy izany. Na tsy vahaolana maharitra aza, manampy betsaka ireo mpianatra ny fizarana sakafo toa izao. Mifanandrify rahateo amin’ireo tetikasa eny anivon’ny fiarahamonina izay napetraky ny Star ho laharam-pahamehana izy ity, satria sady mahakasika ny fanabeazana no asa sosialy ihany koa.